यस्ता हुन्छन् उच्च रक्तचापको लक्षण, कसरी बच्ने ? « Mero LifeStyle
सन्दर्भ : विश्व उच्च रक्तचाप दिवस
यस्ता हुन्छन् उच्च रक्तचापको लक्षण, कसरी बच्ने ?
सुमित्रा लुईंटेल	|| 17 May, 2021
डा. अनिल भट्टराई, मुटु रोग विशेषज्ञ
उच्च रक्तचाप अहिले धेरैमा देखिरहेको समस्या हो । विभिन्न कारणले गर्दा यो समस्या डरलाग्दो रुपमा बढ्न थालेको छ । यो बढ्नुमा विभिन्न कारक तत्व रहन्छन् ।
नेपाल स्टेप्स सर्वे २०१९ का अनुसार २४.५ प्रतिशत नेपाली उच्च रक्तचापबाट ग्रसित छन् । जसमध्ये २९.८ प्रतिशत पुरुष छन् भने १९.७ प्रतिशत महिलमा उच्च रक्तचापको समस्या छ ।
किन बढ्छ रक्तचाप ? यसका लक्षणहरु के के हुन् ? यसबाट बच्ने उपायहरु के–के हुन् ? र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने बारे मुटुरोग विशेषज्ञ डा. अनिल भट्टराईको सुझाव यस्तो छ :
किन बढ्छ रक्तचाप ?
अधिकांश मानिसलाई बढ्दो उमेरसँगै उच्च रक्तचापको समस्या देखिने गर्छ । यस्तै, मिर्गौला सम्बन्धी रोग, हर्मोनको गडबढ वा लामो समस्यसम्म स्टेरोइड जस्ता औषधिको सेवन गर्नाले पनि रक्तचाप बढ्न थाल्छ । कतिपय युवापुस्तामा खानपानको असन्तुलन, तनाव जस्ता कारणले रक्तचाप बढीरहेको छ । तर, यसलाई भने सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ ।
रक्तचाप बढेको कसरी थाहा पाउने ?
उच्च रक्तचाप बढे नबढेको कुरा जाँचेरमात्र थाहा हुन्छ । यसको लक्षणमा भर पर्नु हुँदैन । किनकि उच्च रक्तचापको कुनै पनि लक्षण नहुन सक्छ । ३० वर्ष उमेर काटिसकेका स्वस्थ व्यक्तिले कम्तिमा वर्षको १ पटक रक्तचाप नाप्नु आवश्यक हुन्छ । उच्च रक्तचाप उत्पन्न गराउने कारक तत्वहरुको जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुले कम्तिमा ३ महिनामा १ पटक रक्तचाप जँचाउनु आवश्यक हुन्छ ।
अधिकांशमा उच्च रक्तचापको लक्षण देखा पर्दैनन् । तर, शरीरभित्र असर पुर्याइरहेको हुन्छ । थोरै प्रतिशतमा भने रिंगटा लाग्ने, चिढचिढापन हुने, मुटुको धड्कन र नाडीको गति बढ्ने, छाती दुख्ने, दम फुल्ने, नाकबाट रगत आउने जस्ता लक्षण देखिन्छन् । त्यस्तै, कतिपयमा सास फेर्न गाह्रो हुने, नाकबाट रगत बग्ने र बेहोस हुने जस्ता लक्षण देखापर्छन् ।
यसकारण बढ्छ रक्तचाप
अव्यवस्थित जीवनशैली, अस्वस्थ खानपान, तनावयुक्त वातावरण तथा स्वास्थ्यप्रतिको बेवास्ता जस्ता कारणले रक्तचाप बढ्छ ।
नसा साँघुरिए वा कडा भएमा
कुनै बच्चामा जन्मजात नै नसा साँघुरो हुने समस्या भएमा उच्च रक्तचापको समस्या हुने गर्छ । त्यस्तै रक्तनली कडा भएर साँघुरो भएमा पनि यसको जोखिम हुन्छ ।
रक्तनली भित्र बोसो वा कोलेस्ट्रोलको मात्रा नियन्त्रण गर्न नसकेमा पनि रक्तचाप बढ्छ । खानामा नुनको बढी प्रयोग, मसालेदार खानेकुरा, मासु वा बोसोजन्य पदार्थ तथा चिल्लो, अमिलो र पिरो बढी खानाले पनि रक्तचाप बढ्ने खतरा हुन्छ । त्यस्तै, पौष्टिक आहार कम खाने मानिसमा पनि यसको जोखिम उच्च रहन्छ ।
धुम्रपान–मध्यपान गर्ने मानिसमा उच्च रक्तचाप हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । साथै, अत्याधिक चिया कफीको सेवनले पनि रक्तचाप बढाउँछ ।
तौल नियन्त्रण गर्न नसकेमा अर्थात् मोटोपनाको समस्या भएका मानिसमा पनि यसको जोखिम रहन्छ । त्यस्तै, अनिद्रा, मुटुसम्बन्धी रोग, हार्मोनमा गडबढी र लामो समयसम्म औषधिको सेवन गर्नु पनि रक्तचापका कारण हुन् । यसका साथै, मिर्गाैला, कलेजो, रगत तथा फोक्सोसम्बन्धी रोगका कारण पनि रक्तचाप बढ्ने गर्छ ।
वंशाणुगत कारण पनि रक्तचाप गढबढ हुन सक्छ । यदि परिवारका सदस्य (बाबु, आमा, हजुरबुबा हजुरआमा) मा ब्लड प्रेसर छ भने पनि सन्तानमा यो समस्या देखिन सक्छ ।
– दैनिक खानामा हरियो तरकारी, सलाद, फलफुल खाने ।
– आवश्यक कसरत, योग अनिवार्य गर्ने
– शरीरको तौल बढ्न नदिने
– धुम्रपान, मद्यपान नगर्ने
– पानी प्रशस्त पिउने
– शारीरिक तथा मानसिक आराम गर्ने
– नुन बढी भएका र चिल्ला खाना कम खाने
– समय–समयमा ब्लड प्रेसर जाँच गर्ने
– बर्षमा २ पटक सुगर, क्लोस्ट्रोल, मृर्गौला जाँच, इसिजी लगायतका जाँच गर्ने
(डा. भट्टराईसँगको कुराकानीमा आधारित । )